Ny ilan'ny vola hafa - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Ny ampahany amin'ny vola madinika
Tsy mila ny lehibanay vaovao izahay! Hentitra izy ary mifehy. Fahadisoam-panantenana lehibe ny fomba fitantanana azy, indrindra fa ny fiheverana ny toe-draharaha miasa izay nankafizinay teo ambany fitantanana teo aloha. Afaka manao zavatra azafady ve ianao? Nahazo izany fitarainana izany aho taona maro lasa izay izay avy amin'ny mpiasa tao amin'ny sampana iray, izay nanara-maso ahy nandritra ny fotoana niarahako tamin'ny maha-tompon'andraikitra ny orinasa HR ao anaty orinasa mpanamboatra sy marketing. Noho izany dia nanapa-kevitra ny handeha eny amin'ny fiaramanidina aho ary hitsidika ilay sampana manantena ny hamaha ny fifanolanana eo amin'ny tompon'andraikitra vaovao sy ny mpiara-miasa aminy.
Nisy sary hafa tanteraka niseho tao amin'ny nihaonako ny fitantanana sy ireo mpiasa. Ny marina dia ny hoe ny lalan'ny mpitarika dia vaovao vaovao raha oharina amin'ny teo alohany, saingy tsy ilay olona mahatsiravina nolazain'ny mpiara-miasa taminy akory. Na izany aza dia naneho ny ahiahiny mafy izy mikasika ny fivoaran'ny orinasa sy ny fandrosoana ary sorena tamin'ny fihetsika ratsy izy taoriana kelin'ny nahatongavany.
Amin'ny lafiny iray, takatro ny zava-tsarotra atrehin'ny mpiasa. Niezaka ny zatra amin'ny fomba fitarihana mivantana vaovao izy ireo, izay tena tsy mahazatra azy ireo. Vetivety dia nampiditra rafitra tsy dia malaza loatra izy io, fa mahomby kokoa sy mahomby sy fenitra fampisehoana. Vetivety dia nitranga haingana ilay zava-drehetra ary angamba tsy ela akory aloha loatra. Na dia somary milamina aza ny mpitondra teo aloha, ny vokatra vokatr'izany dia nijaly noho ireo fomba taloha.
Tsy ilaina ny milaza fa milamina ny raharaha tao anatin'ny volana vitsivitsy. Ny fanajana sy ny fankasitrahana ny tompon'andraikitra vaovao dia nitombo tsikelikely ary nahazo famporisihana izy hahita ny fomba nitomboan'ny etika sy ny asa.
Ity fizarana manokana ity dia nampianatra ahy lesona iray lehibe momba ny olona mifandray amin'ny olona hafa. Ny fanamarihana an'io potika fipoahana mety dia ny andaniny roa ary samy voatery nianatra niatrika zava-baovao sy toe-javatra vaovao izy ireo. Nifandray tamin'ny fanahin'ny fampihavanana ny fifaneraserana samy hafa. Ny fironana amin'ny famoronana hevitra momba ny isam-batan'olona, ​​ny fianakaviana ary ny vondrona satria ny lafiny iray amin'ny tantara heno na ny antoko fahatelo dia manome fomba maharesy lahatra dia matetika mitarika amin'ny olana eo amin'ny fifandraisana.
Ohabolana 18,17 dia milaza amintsika hoe: Samy manana ny rariny aloha ny tsirairay amin’ny raharahany; fa raha ny hafa no miteny, dia ho hita izany.
Ny teolojiana Charles Bridges (1794-1869) dia nanoratra momba ny andininy tao amin'ny fanehoan-keviny momba ny ohabolana: Eto isika dia ampitandremana mba tsy hanamarina ny tenantsika amin'ny hafa ... ary ho jamban'ny hadisoantsika. Amin'izany no ahafahantsika mametraka ny tanjontsika amin'ny hazavana mahery vaika; ary indraindray, saika tsy nahatsiaro tena, mba hanaloka izay mety hitondra fifandanjana amin'ny lafiny iray hafa, na hamela azy tanteraka mihitsy aza. Sarotra ny mamerina ny zava-misy sy ny toe-java-misy miaraka amin'ny fahatanterahana lavorary raha ny amin'ny anarantsika manokana na ny tanjontsika. Ny tanjontsika manokana dia mety ho voalohany ary toa marina, fa raha ny ohabolana dia mety ihany mandra-pandrenesana lafin-javatra hafa.
Ny fironana amin'ny fanatsoahan-kevitra, satria naheno ny lafiny fandresena tena mahasoa ianao dia tsy azo ihodivirana. Indrindra raha namana na olona mitovy hevitra aminao amin'ny fiainana tahaka ny tenanao. Ny valinteny tokana amin'ity karazana ity dia mety hiteraka aloka maizina amin'ny fifandraisana. Ohatra, lazain'izy ireo amin'ny namany akaiky momba ilay mpanao jadona kely izay ananan'izy ireo amin'ny maha-bosoa vaovao izay miteraka olana be eo amin'ny fiainany. Ny fironana ho azy ireo dia manao ny azy manokana ka hijanona eo amin'ny hazavana tsara dia ho lehibe tokoa. Ny namanao dia avy eo hamorona fiheverana diso momba ny mpitantana azy ary hiantra azy ireo sy ireo zavatra atrehiny. Mbola misy loza hafa: mizara ny hafa amin'ny heviny diso izy.
Ny mety hisian'ny fivoaran'ny lesoka marina hanaparitaka tahaka ny afon-tany dia tena misy ary mety hiteraka fahasimban-tena tsy mendrika amin'ny laza sy ny toetran'ny olona na vondron'olona iray. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana iarahan'ny karazan-tantara amin'ny alàlan'ny tsaho na ratsy kokoa, mahita ny lalan-dry zareo amin'ny Internet na tambajotra sosialy. Raha vao aseho imasom-bahoaka dia indrisy ahitan'ny rehetra azy ary tsy afaka atao intsony.
Ny Puritans anglisy tamin’ny taonjato faha-16 sy faha-17 dia nilazalaza ny Ohabolana 18,17 ho fitsarana fitiavana ary nanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny famoronana rivo-piainana feno fahasoavana eo amin'ny fifandraisana. Ny fandraisana andraikitra amin'ny faniriana marina sy amin'ny saina manetry tena hahatakatra ny fomba fijery rehetra amin'ny fifanoherana dia tena fototra amin'ny fanarenana ny fifandraisana. Eny, mila herim-po! Fa ny soa azo avy amin’ny fifanajana sy ny fampivoarana ary ny fanasitranana mampahery dia tsy azo ovaina. Ny mpanelanelana sy ny mpitandrina efa za-draharaha dia mazàna miezaka manao izay rehetra azo atao mba hampivondronana ny antoko mpanohitra rehetra. Amin’ny fanaovana izany, dia mankasitraka ny fahafahana ho an’ny tsirairay haneho ny heviny eo anatrehan’ny hafa izy ireo.
Malagasy 1,19 manome antsika izao torohevitra manaraka izao: Tokony ho fantatrareo, ry rahalahy malalako: aoka ny olona rehetra ho mailaka hihaino, ho malai-miteny, ho malain-ko tezitra.
Ao amin'ny lahatsorany, The Pillow of Grace, ny pasitera William Harrell ao amin'ny Immanuel Presbyterian Church dia mamporisika antsika hamantatra sy hanaja ny ondanam-pahasoavana nampiasain'ny Mpamonjy antsika tamin'ny fifandraisana rehetra. Io anton’ny fahotana io dia mamadika ny fitsarantsika sy manala ny antony manosika antsika, ka mahatonga antsika tsy ho afaka hahatakatra ny fahamarinana feno ao amin’ny fifandraisantsika manokana. Noho izany dia ampianarina isika tsy ny ho marina eo amin’ny fifandraisantsika ihany, fa ny tena fitiavana koa (Efesiana). 4,15).
Ilaina tokoa ny mitandrina rehefa maheno na mamaky momba ny zavatra tsy eken'ny hafa. Noho izany, ao anatin'ny andraikitray, andao hojerentsika ny andaniny roa amin'ny vola madinika alohan'ny hitsidihantsika ireo fombafomba. Mitadiava ny zava-misy ary, raha azo atao, dia makà fotoana hitenenana amin'ireo rehetra voakasik'izany.
Ny fanehoana fanampiana amin'ny hafa amin'ny herin'ny fitiavana sy ny fihainoana tsara mba hahatakarana ny sisin'izy ireo amin'ny vola madinika dia ohatra amin'ny fahasoavana tsy ampoizina.